Bloggers Of Bloggers: ကျနော်တို့ရဲ့ ခင်ဦးမေ
Posted by ဘလောဂ်ဂါတို့ရဲ့ ဘလောဂ့်ဂါ Labels: ခင်ဦးမေ
သည်နာမည်ကို ဘလော့ဂ်ဂါ တော်တော်များများ သိမည်ထင်သည်။ သူမနှင့်ကျနော် စတင်ရင်းနှီးခဲ့သည့်အကြောင်းက အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ကျနော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း မေဦး တစ်ယောက်ကိုရှာဖွေစဉ် ခင်ဦးမေဘလော့ဂ်ကို စတင်တွေ့ရှိမိလေသည်။ ကျန်ုပ်ရဲ့ သူငယ်ချင်းများဖြစ်လေမလားလို့ အစကတော့ထင်မိသည်။ ထိုနောက့် ကျနော်ရဲ့ သူငယ်ချင်းသည် ခင်ဦးမေလိုမဟုတ်။ သူမသည် ဘယ်အရာကိုလုပ်လုပ် သေသေချာချာ လုပ်သည်။ တည်တည်ကြည်ကြည်ရှိသူဖြစ်သည်။ ခင်ဦးမေလိုမဟုတ်။ ခင်ဦးမေသည် ဗမာစာ ကောင်းကောင်းရေးမတက်။ သူ့အဆင့်သည် မူကြို သုံးခါကျ ကလေးတစ်ယောက်သာသာလောက်ရှိသည်။
သူမရေးထားသော စာများသည် အရေမရ အဖတ်မရများသာဖြစ်သည်။ ဘာဆိုဘာမှ မရှိ။ သူမဘလော့ဂ်သည် ကျနော်တို့ အခုနေသောအဆောင်နောက်မှ အမှိုတ်ပုံ အဆင့်လောက်ရှိသည်။ ကျနော့်အဆောင်အနောက်က အမှိုက်ပုံသည် ပို၍ အဆင့်သာမည်ထင်သည်။
သူသည် လူသိများချင်စိတ်မရှိ။ ကျော်ကြားချင်စိတ်မရှိ။ ဆ၇ာလုပ်ချင်စိတ်မရှိ။ ခင်ဦးမေကတော့ အဲ့လိုမဟုတ်။ ဘလော့ဂ်တိုင်းတွင် သူများရေးထားသောစာများကို ဘယ်တော့မှ သေသေချာချာမဖတ်။ အပေါ်ယံဖတ်ပြီး ကွန့််မန့် ကဗျာကယာပေးသည်။ သူ့ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ သူ့ဘလော့ဂ်လူသိများရေးပင်ဖြစ်သည်။ သူ့မှာ အနုပညာဆိုလို့ ဘာမှမရှိ။ ညအိပ်ခါနီးတွင်း သူ့ယောင်္ကျားကို ချိုမိုင်မိုင်လောက်သာကတက်သည်။ သူမသည် အနုပညာကိုနားမလည် အနူပညာကိုတော့ သိမည်ထင်သည်။
ဘာကြောင့်သူ့ ဘလော့ဂ်မှာ လူများနေသလဲ။ ဟုတ်ပါသည်။ သည်ကိစ္စကိုမေးစရာရှိသည်။ ခင်ဦးမေ ဘလော့ဂ်မှာ လူများရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာ ၁။ ဘလော့ဂ်တိုင်းတွင်း ကွန်မန့်ပေးခြင်း။ ၂။ သူသည် ရက်ကွက်ထဲမှ အာပေါင်အာရင်းသန် အတင်းအလွန်တုတ်တက်သော မိန်းမတစ်ဦးနှင့်တူသည်။ အတင်းကြိုက်သူတို့ (သို့မဟုတ်) အရေမရ အဖတ်မရ ကြိုက်သူတို့သည် ခင်ဦးမေ စီဘောက်မှာ အချိန်ဖြုန်းလေ့ရှိကြသည်။
အားလုံးခြုံကြည့်ရရင် ခင်ဦးမေသည် ဗမာစာကိုဖျတ်ဆီးနေသူဖြစ်သည်။ မြန်မာဘလော့ဂ်များကို သိက္ခာချနေသူဖြစ်သည်။ သူမလို ဘလော့ဂ်သူ ဘလော့ဂ်စာမျတ်နာများပေါ်တွင် မရှိသင့်သော ဘလော့ဂ်ဖြစ်သည်။
မောင်ဘရေ...အဆင်ပြေရင် ကျွန်မဆက်သွယ်ချင်ပါတယ်...ကျွန်မလည်း မျက်စိလည်ပြီး ခင်ဦးမေရဲ့ ဘလော့ကို ရောက်သွားခဲ့ဖူးပါတယ်...ပထမတော့ ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်...ပြီးတော့ တကယ်ကိုပဲ...မောင်ဘပြောသလို အရည်မရ အဖတ်မရဖြစ်နေတယ်...အမြင်ကတ်လို့ ...ကောမက်လည်းရေးပါတယ်...မောင်ဘလည်း တွေ့မယ်ထင်ပါတယ်...သူ့ကို အထင်ကြီးသူ အများအပြားထဲမှ..ရှားရှားပါးပါးပဲ ကျွန်မကနေ သူ့ကို အရည်မရ အဖတ်မရလို့ ရေးထားပါတယ်...တကယ်ဆို သူက အသက်ငယ်တဲ့သူလည်း မဟုတ်ဘူး...ငယ်တဲ့သူဆို နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်...တကယ် တကယ်..တခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး...အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အရှက်မရှိ..သူ menopause ဖြစ်တာလည်း ရေးလိုရေး..ယောက်ျား မချစ်တော့တာလည်းရေးလိုရေးနဲ့...စိတ်ပျက်မိပါတယ်...ကျွန်မ အားရင်အားသလို မမေ့မလျော့ မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်ပါတယ်....အမြင်ကတ်ရင် တန်းပြီးကောမက်ရေးမလို့လေ...သူများဆိုဒ်တွေဆိုရင် သူတ၊ရသ ရစရာတွေ ချည်းပါပဲ...သူမရှက်တတ်ဘူးထင်တယ်....
Who force you to read her blog? Noone right.
Pls dont be sucharude man.
You are monitoring her site. Again who ask you to do that? YOu are so curious what she will write until you can't neglect her.
You guys think she has no value, just dont visit hers. She hasaright to write what she wants in her own page. Give heraspace. I am not her follower or anyone but cant stand the rude people.